M/weyne Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabatay u jeediyey Golaha Shacabka Somalia… – Hagaag.com
M/weyne Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabatay u jeediyey Golaha Shacabka Somalia…
Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa duhurnimadii maanta khudbad u jeediyay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somalia.
“Hadalkii aan ka sheegay gunaanadkii shirkii Dhuusamareeb ee ahaa inaan dib ugu soo celiyo Golaha Shacabka. Golaha Shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeena. Golaha Shacabka waa hay’adda ugu sareysa ee metelaadda shacabka Soomaaliyeed, oo shan iyo toban milyan ah, oo aad tihiin midnimadii shacabka Soomaaliyeed, go’aanada aad gaartaana maaha waxaad ku gaarteen shakhsiyaad waxaad rabtaan iyo Magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go’aanada aad gaarteen waxaad ku gaarteen rabitaanka dadkaad meteshaan.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “War Murtiyeedkii Dhuusamareeb wuxuu dhigaayay in dalka hadda ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigeeda ku qabsoomta, lagana wadatashado iyadoo hawshaan loo saarayo guddi farsamo ama ka soo baaraan-degga hannaanka doorashada, qaabka uu ku dhacaayo, dhaqangalkiisa iyo ballanqaadkiisa.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri “Sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in Xukuumadda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyadu ay marwalba wadahadlaan, wadahadalna uu furan yahay oo aan la kala dudin, la wadatashado, lees qanciyo, lalana yimaado qorshayaal iyo go’aano siyaasadeed, oo awoodda dib ugu celineysa shacabka Soomaaliyeed, ee aad idinku meteshaan.”
Waxa uu intaa raaciyay “Bacdamaa aad tihiin Codkii Shacabka oo aad meteshaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan barano golahani wuxuu wakiil u yahay Dowlad Goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed, go’aanka aad gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida ay tahay, waa sida caalamka oo dhan ku shaqeeyo. Waxaan idin cadeynaya inaan halkan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno Madaxda Dowlad Goboleedyada, si kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan, hadduu Ilaahay yiraahdo.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa Xildhibaanada Golaha Shacabka kaga mahadceliyay shaqooyinkii ay qabteen. Madaxweynaha ayaa intii uu hadlayay soo hadal qaadin wax muddo kordhin ah, oo Gole-yaasha Dowladda ay sameysanayaan.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Somalia ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inuu gaaro Magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo la fillayo in uu ka furmo Shirka Dhuusamareeb 3.